तथ्यांकोवाच : धूप उत्पादनमा विद्यमान सम्भावना
काठमाडौं (अस) । मुलुकभित्र प्रशस्त मात्रामा धूप उद्योग रहे पनि आन्तरिक मागलाई धान्ने गरी धूप उद्योगको विकास र विस्तार हुन सकेको छैन । विगत १० वर्षयता धूपको आयात औसतमा वार्षिक २१ प्रतिशत बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७४ मा मात्रै करीब रू. ४१ करोडको धूप आयात भएको छ । विश्वमा पनि धूपको माग विगत ५ वर्षमा औसतमा वार्षिक ३ प्रतिशत बढेको छ । यूएनडीपीले गरेको एक अध्ययनले नेपालमा धूपको कुल मागको आधा अंशमात्रै स्वदेशी उत्पादनले धान्ने गरेको देखाएको छ ।
यस वर्ष नेपालबाट करीब रू. ४ करोडको धूत निर्यात भएको छ । हाल नेपालको धूप विश्वका करीब ३२ ओटा देशमा निकासी भइरहेको छ । धूप उद्योगको समुचित विकास र विस्तार भए धूप आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिने देखिन्छ । त्यस्तै, विश्वको ३३ करोड डलरभन्दा बढीको धूप बजारमा नेपालले वातावरण र मानव स्वास्थ्यमैत्री अर्गानिक धूप निर्यात गरी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
यसका लागि निजीक्षेत्रले यस उद्योगमा लगानी बढाउन आवश्यक छ । त्यस्तै, सरकारले पनि नेपाली धूप उद्योगलाई आवश्यक प्रोत्साहन, अनुदान र संरक्षण प्रदान गर्नुका साथै करमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नु पनि आवश्यक छ । स्वदेशको रू. १ अर्ब र विदेशको रू. ३३ अर्बको धूप बजार नेपाली लगानीकर्ताका लागि राम्रो अवसर रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
‘कर छल्ने व्यवसायीलाई छापा मारेर कडा कारबाही गरिने’
आरबीबी मर्चेण्ट बैंकिङको चौथो वार्षिक साधारण सभा